Wararkii ugu dambeeyay dagaal aad u culus oo ka dhacay degmada Afgooye iyo cidda gacanta ku haysa - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay dagaal aad u culus oo ka dhacay degmada Afgooye iyo cidda gacanta ku haysa
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi weli laga maqlaayo rasaas culus, iyadoona gebi ahaan degmadaasi ay la wareegeen dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Dagaalka ayaa sida la sheegay bilawday kadib markii dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay dhowr jiho weerar kaga soo qaadeen degmada Afgooye, waxaana haatan lasoo sheegayaa in ciidankii maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa AMISOM ay gebi ahaan isaga baxeen deegmadaasi.
Dagaalyahanada Al-shabaab oo la sheegayo inay haatan ku sugan degmada Afgooye ayaa la wareegay dhowr xarumood, waxaana goobaha ay la wareegeen ka mid ah
1- Xarunta degmada Afgooye
2- Saldhiga booliska
3- Xaafadaha Godey iyo Baal-Guri
4- Xarunta agoonta ee ku taala degmadaas iyo goobo kale.
Mid ka mid ah dadka halkaasi ku sugan oo diiday inaynu magaciisa warbaahinta u isticmaalno ayaa inoo xaqiijiyay in maanta degmadaasi ay qasan tahay islamarkaana xaafadaha ku yaala degmadaasi ay haatan ku sugan yihiin dagaalyahanadda Al-shabaab.
Dagaalka oo haatan u muuqda mid ka yara qaboobay sidii hore ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay, waxaana cabsi aad u xoogan ay soo wajahday dadka deegaanka.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa haatan ku wajahan degmada Afgooye, iyadoona la sheegayo in ciidanka Al-shabaab ay dhufeyso ka galeen wadooyinka laga soo galo degmadaas.
Si kastaba ha ahaatee, degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeysay noqotay goob ay dagaalyahanadda Al-shabaab si joogto ah isaga soo geli karaan xiligii ay doonaan.